रुँदारुँदै हाँस्नु परेको छ, र हाँस्दाहाँस्दै रुनु परेको छ: दुर्लभ मुटु र मष्तिष्क भएका – प्रचण्ड – Life Nepali
रुँदारुँदै हाँस्नु परेको छ, र हाँस्दाहाँस्दै रुनु परेको छ: दुर्लभ मुटु र मष्तिष्क भएका – प्रचण्ड
केही समयअगाडि एक कार्यक्रममा दुर्लभ मुटुभएका प्रचण्डले जनयुद्धका समयमा मारिएकामध्ये पाँच हजारको जिम्मेवारी लिन आफु तयार रहेका बताउनुभएको थियो । उहाँको त्यो सहासपछि देश सञ्चारका सम्पादक युवराज घिमिरेज्युले दुर्लभ मुटु भएको प्रचण्ड भनेर लेख्नुभयो । उहाँको त्यो अभिव्यक्तिको कम्पन केहीदिन प्रभावकारी रुपमै रह्यो । जनयुद्धको नेतृत्व प्रचण्डले मात्रै गरेका होइनन्, मोटो मशालदेखिकै तयारी हेर्दा किरण, सीपी गजुरेल, डा. बाबुराम भट्टराई, रामबहादुर थापा बादललगाएतका नेताहरु पनि जनयुद्धको उत्तिकै जिम्मेवार नेताहरु थिए ।
तर, अरु कुनै नेतामा त्यस्तो मुटु भेटिएन, जसले जनयुद्धका बेलामा मारिएकाहरुको जिम्मा लिने हिम्मत गर्न सकोस् ।प्रचण्डले बारम्बार भन्दै पनि आउनुभएको छ, जनयुद्धका सम्पूर्ण घटनाको जिम्मा म लिन्छु । जेल जान परे पनि मै जान्छु । माओवादीका कोही नेता कार्यकतामाथि त्यो बेलाका मुद्दा नलाइयोस् । चानचुने मुटु भएकाले यस्तो भन्ने हिम्मत सायदै राख्न सक्छ । सक्छन् भने त्यो प्रचण्डले नै सक्छन् ।
जनयुद्ध यस्तो समयमा सुरु भएको थियो कि, संसारबाट कम्युनिष्टहरु ओरालो यात्रामा थिए । अमेरिका विश्वमा एकल सुपर पावरका रुपमा खडा थियो । विश्वको सुपर पावर अमेरिकाले आतंककारीको सूचीमा राखेका थिए । छिमेकी देश विशाल भारतमा पनि कम्युनिष्ठ विरोधी सत्ता थियो । यस्तो जटिल अवस्थामा सगरमाथाको देशबाट प्रचण्डको नेतृत्वमा जनमुक्ति सेना बनाएर कम्युनिष्ट पार्टीको झण्डा फहराइएको थियो । नेपालको सिंगो इतिहासमा यो सबैभन्दा उथलपुथलकारी राजनीतिक परिवर्तनका लागि गरिएको परिघटना थियो । यो सामान्य मुटु भएकाले कल्पना गर्न सकिने विषय थिएन ।
जनयुद्धको प्रभाव दश रेक्टरको भूकम्प जस्तै थियो । यसैको धक्काले २४० वर्षे पुरानो राजतन्त्रको जरो उखलियो । यस कारण पनि यो असाधारण घटना थियो कि पहिलो पटक जनता आफैले आफ्नो इतिहास लेखिका थिए, त्यो पनि रगतले ।अक्सर मानिसहरु आधा मन लगाएर काम गर्छन । स्वभाविक रुपमा सफलता पनि आधा नै हुन्छ । तर, आधा मनले काम गरेर सपनाको सगरमाथा चुम्न सकिंदैन । ‘राष्ट्र र जनताका लागि काम गर्नुपर्छ भनेर सुरुदेखि म राजनीतिमा सम्पूर्ण रुपमा लागे ।’ प्रचण्डको यो भनाइ मनन योग्य छ ।
उहाँ पुरै मनले राजनीतिमा लाग्नुभएको थियो भन्ने कुरा इतिहासका घटनाक्रमले नै पुष्टि गरेको छ । यसो भन्दै गर्दा, प्रचण्डको डाइनामिक मुटु र मष्तिष्कप्रति लोभ लाग्छ । देशको राजनीति र विकासले भरपर्दो बाटोमा हिड्न अझै बाँकी नै देख्छु । भ्रष्टाचार र अनियमितताले झन डरलाग्दो रुप धारण गर्दै गरेको देख्छु । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुले जताततै ब्रह्मलुट गरिरहेको समाचार पढ्दा आङमा रिजिङ्ग हुन्छ, शरिरमा काँडा उम्रिन्छन् । सरकारका प्रमुखहरु नीति बनाएरै देश लुटिरहेका छन् भन्ने समाचार कति पढ्नु ? राष्ट्रियताको सवाल त झन डरलाग्दो छ । हजारौंको बलिदानबाट, लाखौंको संघर्षबाट देशले प्राप्त गरेका उपलब्धीहरु गुम्ने त होइन। भन्ने कुराले पनि दुर्लभ मुटुहरुको माया अझ बढी लाग्छ ।
यी सबै कुरा एक ठाउँमा जम्मा पारेर हेर्दा, चिन्तन मनन गर्दा कहिले कहीँ प्रचण्डको दुर्लभ मुटु देखेर डर पनि लाग्छ । कतै यो मुटुको गति रोकियो भने ? सायद यो मेरो डर अनर्थ छैन । यस्ता मुटु र मष्तिष्कहरु बेहिसाव भैदिएका भए सायद मैले डराइरहनुपर्ने थिएन । मेरै मुटु पनि प्रचण्डकै जस्तो दुर्लभ हुन सकेको भए सायद डराउनुपर्ने थिएन होला । हामी नौ जवान भनौदाहरु आफ्नै जीवनको अभिभारा बोक्न नसकेर सडक र गल्लिहरुमा बरालिंदै छौं ।
तर, ६५ नाघेका प्रचण्डमा शारिरिक र मानसिक दुवै पक्षबाट देशको अभिभारा बोक्न सक्ने होसपूर्ण युवा जोश छ । जीवनको उत्तरार्धमा पनि राष्ट्र र जनताका लागि दश गुणा सक्रियता बढाउने संकल्प गर्ने सक्ने मुटु छ । देश आफै बन्दैन, बनाउनुपर्छ । देश बनाउन यस्ता मुटुहरु चाहिन्छन् । यसका लागि हरेक म आफै जाग्नुपर्छ । यस्ता मुटुहरुको दुर्लभता डरलाग्दो कुरा हो ।
देश र जनताका लागि सक्रियतापूर्वक काम गरेर सम्पूर्ण जीवन बिताउने संकल्प गर्ने मुटुहरुको संख्या बढ्दै जानुपर्छ । सत्तारुढ नेकपाले देश र जनताका लागि बेहिसाब काम गरोस् । नेपालको राजनीतिले प्रचण्डकाजस्ता थुप्रै मुटुहरु जन्माउन् । ओली सरकारप्रति जनताको आक्रोश कम हुँदै जानेछ भन्ने आशा गरौं । भौतिकवादी, मार्क्सवादी अनि समाजवादी मुटुहरुको दुर्लभवता घट्दै जानेछ भन्ने अपेक्षा गरौं । जर्मनमा जन्मिएका माक्र्स एंगेल्सका मुटु । रुसमा एक सताब्दी अघि जन्मिएका लेनिन स्टालिनका मुटु । चीनियाँ क्रान्तिले जन्माएको माओका मुटु ।
ल्याटिक अमेरिकन क्रान्तिले जन्माएको चे ग्योभारा र फिडेल क्यास्ट्रोका मुटु । यी संसारकै मानव जातिको प्रगतिका लागि जन्मिएका दुर्लभ मुटु र मस्तिष्कहरु हुन् । यस्ता दुर्लभ मुटुहरु कसरी जन्छन, बेला बखत यस्ता विषयमा पनि बहस गरौं । किनकी फेरि समाजवादी क्रान्तिका लागि यस्तै दुर्लभ मुटु र मस्तिष्कहरु चाहिएको छ । – राजमार्ग डट कम बाट राजकुमार श्रेष्ठको लेख साभार ।
Previous नेपाली कांग्रेसद्वारा तेस्रो पटक संसद बैठक अ’वरोध, अर्को बैठक २८ गते
Next प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापालाई बर्खास्त गर्न सांसद् माग